Akụkọ - 2020 bụ afọ pụrụ iche, COVID-19 na-agbasa n’ụwa niile site na mbido afọ
2020 bụ afọ pụrụ iche dị otú ahụ, COVID-19 na-agbasa n'ụwa niile site na mmalite nke afọ
Na-atụghị anya ya, 2020 bụ afọ pụrụ iche, COVID-19 na-agbasa n'ụwa niile site na mmalite nke afọ. Ndị China niile biri ememme mmiri na-adịghị jụụ, ha anaghị eri nri ma ọ bụ zụọ ahịa, enweghị ndị enyi na-ezute ma ọ bụ ndị ikwu. Ọ dị oke iche na mbụ！
N'ihi ọchịchị gọọmentị China, mgbasa a na-achịkwa nke ọma, site na nkwụsị, ụlọ ọrụ mepere otu otu.
Anyị nwere oke ụjọ mgbe anyị nọ n'ụlọ, n'ihi na anyị binyere aka na nnukwu ọrụ tupu ememme mmiri, yana oge nnyefe siri ike. N’agbanyeghi na oria ojoo a bu na mberede, anyi anaghi acho ida n’oge n’agbanyeghi. Yabụ site n'ụbọchị anyị bido ọrụ, ndị ọrụ niile na-arụsi ọrụ ike ọnụ, na-arụ ọrụ karịa ụbọchị ọ bụla, iji nweta oge nnyefe.
N'ikpeazụ, anyị gwụchara nza nke mbụ, 4pcs nke drums dị njikere ịpụ. Lee! Lee ka ha si maa mma! Kesa ya na ihe ncha ocha edo, dika nganga nke ndi oru Stamina! Onye ahịa anyị nwekwara obi ụtọ ịnụ banyere ya, akụkọ QC na-egosi na nhazi niile ruru eru, ha nwere ike ịnata ha n'otu ọnwa, lee ka o si bụrụ ihe na-atọ ụtọ! A ka nwere ihe karịrị 50pcs ka agwụchaa, na COVID-19 ka na-emetụta anyị, Ndị ọrụ anyị ezughị, ọtụtụ ndị ọrụ enweghị ike ịhapụ ụlọ ha kemgbe ezumike ahụ iji zere ihe egwu ọ bụla. ma anyị nwere obi ike dị ukwuu, anyị mepụtara jigs dị irè iji mee mgbakọ nke arụmọrụ dị elu, usoro niile dị mma ma mara nke ọma. Ndị ọrụ anyị adịghị enwe ike gwụrụ n'agbanyeghị na ha na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ ahụ na-anwa ike ya kachasị mma iji nye ndị ọrụ ebe obibi dị mma karị, yana efere dị ụtọ ma gbajie kọfị na nri.
Leghachi anya na egwu zuru oke, ha enweghị ntụpọ. Lee ka otu si sie ike! Ọ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma rụọ ọrụ nke ọma, kwesịrị ka ị tụkwasị gị obi!